Madaxweynihii hore ee dalka Mwai Kibaki oo amaanay halyeeyga geeriyooday ee Mark Mwithaga – The Voice of Northeastern Kenya
Madaxweynihii hore ee dalka Mwai Kibaki oo amaanay halyeeyga geeriyooday ee Mark Mwithaga
Madaxweynihii hore ee dalka Mwai Kibaki, waiiro iyo xildhibaano ka tirsan madax dalka ayaa amaanay Mark Mwithaga oo ka mid ahaa halyeydii u soo dagaalamay xornimada dalka oo dhawaan ku geeriyooday maamul goboledka Nakuru.
Siyaasigan rug cadaha ah ayaa isniinta u geeriyooday xanuun dhanka wadnaha ah isaga oo 79 sano.
Kibaki iyo madaxdan kale ayaa hadalka lagu amaanay siyaasigan hore ka jeediyay kaniisada Christ The King Cathedral oo ku taala Nakuru halkaas oo munaasabad baroordiiq ah loogu sameynayay Mark Mwithaga .
Mwai Kibaki ayaa xusay in Mark iyo qoyskiisaba uu sanado badan aqoon u lahaa oo uuna ahaa hogaamiye la isku haleyn karo oo ku dayasho mudan.
Dadkii ka soo qeyb galay munasabadan ayaa waxaa ka mid ahaa xildhibanada degaanka othaya Mary Wambui iyo wasiirka dowlada wadaajinta Mwangi Kiunjuri oo wakiil ka ahaa madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta.
Fariinta ka timid madaxweynaha aya lagu sheegay in halyeygan uu ahaa shaqsi ka soo shaqeeyay dimuqaraadinimada dalka.
Waxaa sido kale ka qeyb galay baroor diiqa wasiirada jinsiyada Sicily Kariuki, gavanaha countiga Nakuru Kinuthia Mbugua, ku xigeenkiisa Joseph Ruto, xildhibaanka bariga Nakuru David Gikaria, Nakuru iyo dhigiisa galbeedka countigaasi Samuel Arama.
Mark Mwithaga ayaa markii ugu horeysay isaga oo xabsi ku jiro loo doortay in uu xildhibaan noqdo sanadii 1966.
Tan iyo sdanadii 1979-kii ayuu aqalka baarlamaanka u matalayay magaalada Nakuru.
Ugu dambeyntina Mark Mwithaga ayaa jimcaha lagu aasay qubuurta Nakuru North Cemetery .
← Nin loogaga shakisanaa argagixisanimo oo lagu dilay Diani oo ka tirsan countiga Kwale
Ciidamada booliska oo 3 burcad ah ku dilay xaafada Kayole ee magaaladatani Nairobi →